Chimwe chezvinhu zvakakosha kuita kuti ive mukadzi akasimba uye zvionera ndiyo Psychology kana kusimba kwehunhu uye kuzivikanwa kunogona kudada. Ndokusaka paBezzia, tinoda kubatsira vanhukadzi vese kuti vazvifarire, vave nesimba uye vatore sarudzo.
Ndokusaka muchikamu chino isu tichida kukubatsira nezano rekuti ungatarisana sei nedambudziko, maitiro ehukama neshamwari dzako, mudiwa kana mhuri kana kukuudza makiyi ekuva vanhu vane zvinhu zvakajeka.
Kunyangwe isu tisiri vepfungwa, isu tine fungidziro nezvenyaya iyi uye tinogona kukupa matipi ayo achakubatsira iwe kuvandudza zvemukati maficha ako maitiro ekuve. Tinovimba vanokubatsira.
Kunyora uye kubatsira kwayo kwekurapa
kubudikidza Susana godoy inoita 4 mazuva .
Kunyora kunewo huwandu hwezvakanakira kurapa. Kunyangwe isu tingave tisina kumbozviona, inogona kuve kurapwa ...
Pane varume vanoshushwa nevadiwa vavo here?
Ruzhinji rwevanhu vanosanganisa kushungurudzwa nevakadzi, vasingatarise kuti chinhu chino…
Misiyano pakati pekutendeseka nekutendeseka yaunofanira kuziva
Nekuti isu hatigaroziva maitiro ekuita misiyano chaiyo yerimwe nerimwe remazwi anopfuudzwa kwatiri ...
Izvi ndizvo zvipingaidzo pakukura kwako wega
Kubudirira kwemunhu inzira yehupenyu hwese, ndiko kuti, kwatinovandudza mazuva ese uye zvakare kukura ...
Hunhu hunokosha hwevanhu vane narcissistic
Sezvo ini ndine chokwadi kuti iwe unotoziva, vanhu vane narcissistic vanonzwa kuyemurwa kukuru uye vanozvida ivo pachavo. Ichokwadi…
Kuti hypersexuality inokanganisa vakaroorana
Bonde chinhu chakakosha kune chero vakaroorana. Nekudaro, kutorwa zvakanyanya kunogona kukonzera matambudziko makuru…
Mhando dzekuzvidemba kuti tese tinogona kutambura
Unoziva mhando dzekutendeuka here? Zvakanaka, kune akati wandei uye iwe unofanirwa kuvaziva vasati vagadzikana muhupenyu hwako, kana pamwe,...
Munhu anonyengedza anoita sei kana awanikwa?
Munhu anonyengedza ndeuyo anowanzovakira pfungwa dzake kana chokwadi panhema, uyo panguva imwechete anoedza kuzviita ...
Ndeipi mhedzisiro yekushungurudzwa kwepfungwa muvaviri
Kushungurudzwa kwepfungwa nemudiwa chinhu chisingafanirwe kubvumidzwa chero mamiriro ezvinhu kubvira…
Hunhu hwevanhu vanofarira: vaone nenguva
Unoziva here unhu hwevanhu vanofarira? Hazvina kunonoka kuziva kana wakakomberedzwa navo. Unogona kuona kuti...
Tsika dzepfungwa dzekushandisa zuva nezuva
Kana tikachengeta miviri yedu zuva nezuva, tinofanirawo kuita zvimwe chetezvo nepfungwa dzedu. Nekuti isu tatoziva kuti chii chaizvo ...
Pane mugumo murudo here?